Sahanka Qiimaynta Baahida Degdega ah (RNA) - UNHCR Egypt
Waa maxay RNA?
Qiimaynta Baahiyaha Degdega ah ee COVID-19 (RNA) waa sahan loo qorsheeyay in si wanaagsan loo fahmo saameynta COVID-19 uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah, xaaladahooda nololeed, awoodahooda iyo caqabadaha ay kala kulmaan Masar. Sahankan waxa loo isticmaali doonaa in loogu doodo baahiyaha qaxootiga gudaha iyo dibaddaba. Waxay sidoo kale ka caawin doontaa UNHCR inay bixiso jawaabo ku filan oo ay ka caawiso xulashada saxda ah ee barnaamijyada iyo mashaariicda haddii ay dhacdo in masiibada COVID-19 ay sii socoto muddo dheer.
Ujeedadan awgeed, UNHCR, iyada oo loo marayo “Baseera center”, waxa ay waraysiyo telefoon la yeelanaysaa koox qaxoonti ah oo si aan kala sooc lahayn loo doortay Masar si ay u baaraan xaaladahooda. Runtii aad iyo aad ayaanu uga mahadcelinaynaa ka qaybqaadashadaada waxaanan ku xisaabtamaynaa wada shaqayntiina inta lagu jiro waraysiyada.
Fadlan ogow in ka qaybqaadashada sahankani aanay dammaanad qaadayn helitaanka kaalmada.
Maxaa dhici doona?
“Baseera” waxay kugu soo wacaysaa talefoonka ka diiwaan gashan UNHCR lambarkan soo socda:
Waraysiiyuhu waxa uu waydiin doonaa in uu la hadlo madaxa qoyska, kaas oo u jawaabaya magaca qoyska oo dhan. Haddii ay dhacdo in isaga/iyada ay awoodi waayaan in ay ka qeybgalaan, wareysiga telefoonka waxaa dib loo dhigi karaa taariikh kale ama xubin qoyska ka mid ah oo ka warqaba xaaladda dhaqaale iyo bulsho ee qoyska, ka weyn da’da 18, ayaa u soo jawaabi kara magacooda.
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa wicitaanka taleefankan?
Wareysigu wuxuu qaadanayaa ilaa hal saac, iyadoo ku xiran hadba inta qoysku le’eg yahay.
Sideen ku heli karaa ballan?
Xubin ka tirsan shaqaalaha “Baseera” ayaa kula soo xiriiri doona taleefoon si uu ballan kuu siiyo. Looma baahna inaad u tagto xafiiska UNHCR si aad ballan u qabsato.
Fadlan hubi in nambarkaaga mobilada ee la cusboonaysiiyay ay ogtahay UNHCR Infoline ama adoo cusboonaysiinaya foomka onlaynka ah halkan.
Fadlan dhammaan xubnaha qoyska u diyaar kaadhkaga magangelyo-doonka/qaxootiga ee UNHCR.
Yay tahay in la helo taleefoonka?
Qofka go’aan ka gaarayaa waa inuu joogo guriga oo waa inuu ka jawaabi karaa magaca qoyska oo dhan, haddii ay dhacdo inuu isagu/iyada ka qaybgeli waayo, waraysiga telefoonka dib ayaa loo dhigi karaa taariikh kale ama xubin qoyska ka mid ah. kuwaas oo la socda xaalada dhaqaale iyo bulsho ee qoyska, ka weyn da’da 18, ayaa u jawaabi kara magacooda.
Maxaan ugu baahanahay inaan ka qaybqaato sahanka?
Qasab kuguma aha inaad ka qaybgasho laakiin si adag ayaa laguugula talinayaa inaad sidaas samayso. Ka qaybqaadashada, waxaad gacan ka geysan doontaa hagaajinta habka UNHCR iyo la-hawlgalayaasha kale ay u bixiyaan adeegyada iyo ilaalinta.
Ma jiraan natiijooyin gaar ah oo ka soo baxay waraysiga.
UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waxay ka ururin doonaan macluumaadka dhammaan waraysiyada lagu sameeyo kaydka elektarooniga ah. Xogtan ayaa markaas lagu falanqeyn doonaa macluumaadka ku saabsan xaaladda nololeed ee qaxootiga dalka. UNHCR waxay u isticmaali doontaa macluumaadka si ay ugu doodo baahiyaha qaxootiga gudaha iyo dibaddaba. Macluumaadka waxaa sidoo kale loo isticmaali doonaa in lagu caawiyo xulashada habboon ee barnaamijyada iyo mashaariicda.
Si naxariis leh u fiirso in ka-qaybgalka xog-ururintan aanay dammaanad qaadayn helitaanka kaalmo kasta.